Dhaxal Sugaha boqortooyada Sacuudiga oo Malaayiin duldhigay kooxda. – Kismaayo24 News Agency
Dhaxal Sugaha boqortooyada Sacuudiga oo Malaayiin duldhigay kooxda.
by admin 29th April 2019 016
Golaha Shacabka oo manta kulankooda uga doodaaya.
Qaar kamida Ehelada Ninkii Maleegay gumaadkii oo ladilay.
DAAWO: Ehelada Eng Yariisow oo sheegay Gacantii Dilkiisa ka danbeysay.
Doorashada kuraas ka banaan Golaha Shacabka oo ka socota.